Rollators & Kufamba Aids - Rolling Walkers - Walker neMavhiri
musha / Vanotenderera & Vanofamba
Vanotenderera uye Vanofamba
Apa ndipo paunogona kuwana zvakanakisa Vanotenderera, Vanofamba, Vakasarudzika Knee Vanofamba, uye vachienderera mberi Kubatsira Kubatsira naKarman. Isu tinokupa iwe zvigadzirwa zvinokubatsira iwe kuwana rusununguko. Nekupa misiyano muhukuru hwechigaro, kureba, kureruka muhuremu uye kunyange saizi matai.
Unogona kuvimba nenyaya yekuti Karman Rollators ari nyore kushanda uye anogona kutumirwa kusvika pasuo rako chaipo. Tarisa uone zvigadzirwa zvemashizha uye udzidze nezve chimwe nechimwe chakasarudzika chigadzirwa kuti uone kuti ndezvipi zvinokukodzera iwe.
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru, mhando, uye misiyano yamawiricheya aunosarudza kubva. Tine mamwe masarudzo e Manual Wiricheya kuti chero mumwe mugadziri, kusanganisira Kutakura Mawiricheya, Mawiricheya akajairwa, Mawiricheya asingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya, Ergonomic Wiricheya uye zvakawanda.
Kusarudza chikamu, modhi, ruvara, uye poindi yemutengo zvakakosha kuti mushandisi wekupedzisira anzwisise zvizere edu "mamiriro eunyanzvi" zvigadzirwa zvekufamba. Usakanganwa kutarisa yedu patent S-ERGO S-Rakaumbwa Seating System. Takazvipira kukutsvagira chigaro chakanakira kushandisa kwako kwehupenyu, mawiricheya edu anonyanyisa mukunyaradza, kufamba uye mitengo. Karman yakatsaurirwa kune zvako zvese zvaunoda, Isu tinopawo Kumira Wiricheya, kutenderedza chigadzirwa chedu mutsetse muMobility Wiricheya chikamu. Tinokutendai nekutishanyira.